April 2016 – Radio KeyFM
Dhageyso :Abwaanka soomaaliyeed ee caanka ah Khaliif Muuse Samatar oo siiyay keyfm wareysi xiisa badan leh.
30th April 2016	Somali Language 0
Abwaan Khaliif Muuse Samatar oo magac dheer Sandheer ayaa waxaa sheegay in uu ku soo biiray sugaanta soomaaliyeed isagoo shan iyo toban jir ah .Mudda dheer oo sugaanta soomaaliyeed oo uu dhan walba uu ka soo qeybqaata sida riwaayadaha ,majaajada ,heesaha iyo sidoo kale gabayada ayaa waxaa u yeesha dhowr …
Dhageyso: Qaramada Midoobeey oo ku dhawaaqday inay xirayso isbitaalka guud ee IFo 1
Dadka ku dhaqan xerada qaxootiga ee Ifo-1 ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan amarka ka soo yeeray hey’ada UNHCR oo ah hey’ada Qaramada Midoobeey ugu qaabilsan dhank arrimaha qaxootiga oo sheegay inay xiraysa isbitaalka guud ee kuyaal xeradaasi islamarkasina dadkaasi ay u aadanaayn adeega caafimaada xerada kale ee Ifo -2. …
Laamaha Gurmadka oo ku howlan badbaada Dad ku jiray Dabaq ku burburay Huruma
Wararkii ugu dambeeyay ee kasoo baxaya dabaqa ku burburay Huruma ayaa sheegaya in ilaa 7 qof ay ku dhinteen. Saddex caruur ah iyo qof weyn ayaa lasoo badbaadiyay,habeenimadii Jimcada. Maanta oo sabti ayaa ilaa labo qof oo dheeri ah laga soo saaray,burburka dhismaha Laanqayrta cas ee Kenya ayaa xaqiijisay dadka …
Dad uu ku dhacay Cudurka Daacuunka oo la jiifiyay Cisbitaalada Mandera
Sida uu kusoo waramayo Wariyaha Keyfm ee Mandera,waxaa aad u kordhay tirada dadka uu soo ridanayo cudurka daacuunka. Saddex qof ayaa u dhintay cudurka oo uu ku jiro Nin waayeel ah oo laga keenay degmada Ceel Waaq ee kowntiga Mandera Ilaa 120 qof oo uu soo ritay cudurka ayaa la …
Afar qof oo u dhintay Shilalkii ay sababeen Roobabkii ka da’ay Nairobi
Ugu yaraan Afar qof ayaa dhintay makhribnimadii shalay, kadib markii derbi uu ku soo dumay,iyaga oo hoos taagan Darbiga ayaa ku yaala wadada Lenana ee wasaarada difaaca iyo safaarada Rushka ee magaalada Nairobi.Waxaana goor dambe la xiray wadadaasi. OCPD-ga Kilimani, Peter Katam ayaa xaqiijiyey dhacdada, wuxuuna sheegay in dadka meesha …
Soomaali sharci daro kusoo galay Kenya oo lagu xiray Mandera
Mandera ayaa lagu xiray ilaa 7 qof oo Soomaali ah,kuwaasi oo lagu tuhunsan yahay in ay si sharci daro ah kusoo galeen Kenya. Booliska ayaa baaraya eeda loo haysto dadka lasoo qabtay ee 7-da qof gaaraya. Maxkamada Mandera ayaa amartay in todobada qof lagu sii hayo saldhiga booliska,inta kiiskooda dib …
Shil Baabuur oo ka dhacay Isiolo.
Ilaa saddex qof ayaa ku dhaawacmay shil baabuur oo ka dhacay kowntiga Isiolo,maalinimadii shalay. Booyad shidaal oo u socotay Marsabit ayay isku dhaceen gaari nooca Isjiidka loo yaqaan. Shilka ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Isiolo,iyada oo dadweyne badan ay isugu soo baxeen goobta uu shilku ka dhacay. Labada darawal ee …
Cord oo u Joojisay Banaabaxii ka dhanka ahaa IEBC,Baroordiiqda loo samaynayo Mama Lucy.
Isbahaysiga mucaaradka ee Cord ayaa u joojiyay,mudaharadkii ay qorsheynayeen ee ka dhanka ahaa IEBC,aaska qaran ee loo samaynayo marwadii koowaad ee hore,Mama Lucy Kibaki oo geeriyootay Talaadadii aynu soo dhaafnay. Isbahaysiga ayaa sheegay mudaharaadkii qorshaysnaa Talaadada in haatan ay dib ugu dhigeen 9-ka bisha May ee soo socota. “Iyadoo aynu …
Hogaamiyayaasha Mucaaradka oo noqonaya Ilaalo la’aan Xiliga Mudaharaadka
29th April 2016	Somali Language 0
Hogaamiyayaasha Cord Raila Odinga, Kalonzo Musyoka iyo Moses Wetang’ula ayaa noqonaya ilaalo la’aan xiliga ay ku jiraan mudaharaadka ay ku doonayaan in xafiiska looga cayriyo madaxda gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee magacooda loo soo gaabiyo IEBC. Arintan ayaa ka dambaysay,kadib markii taliyaha booliska,Joseph Boinnet uu u diray digniin saraakiisha …
Maydka Mama Lucy Kibaki oo Axada la keenayo Dalka.
Maydka Mama Lucy Kibaki ayaa laga soo duulinayaa London,iyada oo la soo raacinayo duulimaadka shirkada diyaaradaha Kenya Airways. Wakiilka sare ee Kenya u fadhiya boqortooyada Ingiriiska,Lazarus Amayo ayaa sheegay duulimaadka sidda maydka in uu kasoo baxayo London, Sabtida marka ay saacadu tahay 5.55pm,uuna soo gaarayo garoonka Jomo Kenyatta 4.30am maalinta …